Male – Page7– Healthy Life Journal
သုက်ကောင်ကျန်းမာပြီး မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်အောင် . . .
ကိုထက် အမျိုးသားတွေမှာ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း လျော့ကျတာက သုက်ကောင်အရေအတွက် လျော့နည်းမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မျိုးဆက်ပွားစနစ်မှာ ပိုးဝင်တာလို တချို့အခြေအနေတွေကြောင့် အမျိုးသားတွေမှာ သုက်ကောင် လျော့နည်းမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားသမီးရယူလိုတဲ့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သုက်ကောင်အရေအတွက် တိုးလာစေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။...
ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်နဲ့ ဖောလိတ်ဓာတ်က လိင်တံကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး သုက်ကောင်တွေကို ကျန်းမာစေတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ် ရရှိစေမည့် အစာများ – အမဲသား၊ – အဆီနည်း ဝက်သား၊ – ကြက်သား၊ – ဒိန်ချဉ်၊ – သီဟိုဠ်စေ့၊...
အမျိုးသားတို့၏ အရက်စွဲ ပြဿနာ အဖြေရှာ
ကိုမိုး အရက်သေစာကို စတင်စမ်းသပ်ပြီး မသောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အရက်ဆိုတာ စသောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ဖို့ လွယ်ကူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရက်သေစာတွေကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးတဲ့အခါ သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်ဘဝကိုမကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရက်စွဲတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာမက မိသားစု၊...
သားယောကျာ်းလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သည့် ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း (Torsion Of Testis)
ပါမောက္ခဦးအေးမွန်(ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဗိုက်ထဲကနေ ဝှေးစေ့ကိုလာတဲ့ သွေးကြောရှိတယ်၊ သွေးပြန်ကြောကနေ သွေးတွေက သုက်လှောင်ပြွန်ကနေ ပြန်သွားတယ်၊ အဲဒီသွေးကြော၊ သုက်လှောင်ပြွန်တွေကလာတဲ့ ကြိုး(Cord)က ဝှေးစေ့အညှာကို လာတွယ်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့အလိုလို...
ရေမုတ်ရောဂါအတွက် ဆေးကုထုံးနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံး
ကိုထက် ဝှေးစေ့တစ်ဝိုက်ရှိ ကပ္ပာယ်အိတ်ထဲမှာ အရည်တွေ စုပုံနေတာကို ရေမုတ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက ဝှေးစေ့အပေါ် မသက်ရောက်စေပေမယ့် သုက်ကောင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဆေးမကုဘဲနဲ့တောင် လအနည်းငယ်အတွင်း သူ့အလိုလို သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကပ္ပာယ်အိတ် ရောင်ရမ်းနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မည်သည့်အမျိုးသားမဆို...
ညည အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ အမျိုးသားတို့အတွက် . . .
ကိုမိုး ညည တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေထဲ သင်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အိပ်ဆေးမလိုဘဲ သင့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျစေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ နိုးစက်နာရီကို တစ်ဖက်လှည့်ထားပါ ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဆိုတာကို ကြည့်နေမိလေလေ၊ အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလေလေ ဖြစ်ပြီး...
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို တွန်းလှန်ပေးမည့် အစာများ
– ငါး – လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် – တလည်းသီးဖျော်ရည် – ခရမ်းချဉ်သီး – ကြက်သွန်နီ – ကြက်သွန်ဖြူ – ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ – ပဲပုပ်စေ့၊ ပဲနို့၊ ပဲပြား...
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် အမှန်တရားများ
၊ ကိုထက် ၊ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ လိင်တံထောင်မတ်စွမ်း မရှိတဲ့အခြေအနေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဟာ အမျိုးသားတွေမှာ အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့ကျကာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဟာ အဖြစ်များပြီး တချို့အမျိုးသားတွေက စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အချိန်အတောအတွင်း အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ သီတင်းပတ်အတော်ကြာတဲ့အထိ ခံစားနေရရင်...
လိင်စိတ်လျော့နည်းတယ် . .
မေး. ကျွန်တော့်အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ရှိပေမယ့် လိင်မှုကိစ္စကို စိတ်မဝင်စားဘူး၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ကိုသတိုး၊ သမိုင်း။ ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး (ငြိမ်း)၊ စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားသည် ဖြေ. ဒါတွေက...